Taona 2017 – : nanao fandikan-dalàna Zandary manamboninahitra lefitra 15 indray voaroaka | NewsMada
Taona 2017 – : nanao fandikan-dalàna Zandary manamboninahitra lefitra 15 indray voaroaka
Mitohy hatrany ny fanadiovana anatiny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, araka ny toromariky ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Andriamahavalisoa Girard. Ho an’ny taona 2017, miisa 15 ireo zandary manamboninahitra lefitra voaroaka noho ny fandikan-dalàna…
Nanao tatitra manokana momba ny zava-bita ny taona 2017 ny eo anivon’ny fianakaviamben’ny zandarimariam-pirenena ka tamin’izany no nilazan’ity manamboninahitra ambony sady tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ity fa miisa 15 ireo zandary manamboninahitra lefitra voaroaka noho ny fandikan-dalàna. Nambarany koa fa zandary miisa 64 eo am-perin’ny fanadihadiana ara-pifehezana amin’izao. “Tsy roahina fahatany ilay olona fa ao anatin’ny fanarahan-dalàna na ao anatin’ny fanadiovana aza izahay”, hoy hatrany ity manamboninahitra ambony ity.
Nohamafisiny kosa fa nahitana tranga enina fandavana kolikoly (vola 5 ka hatramin’ny 6 tapitrisa Ar) nataon’ny zandary tamin’iny taona iny. Manoloana izay ady amin’ny kolikoly izay indrindra nandany vola 4 tapitrisa Ar (nanao trakta voasoratra amin’ny labasy) amin’ny alalan’ny fanentanana ny olona ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Misy koa ny laharana antso an-telefaonina azo antsoina ao anatin’io trakta fanentanana io raha misy mahita trangana kolikoly. Olona dimy kosa no efa naiditra am-ponja satria nikasa hanao kolikoly tamin’ny zandary tamin’iny taon-dasa iny, raha ny fanazavany hatrany.